Chili Piper: Dib u cusbooneysiinta jadwalka kooxdaada iibinta, jadwalka, iyo sanduuqa | Martech Zone
Chili Piper: Dib u soo nooleynta jadwalka kooxdaada iibka, jadwalka, iyo sanduuqa
Maxjarka Piper waa xal jadwal otomaatig ah oo kuu oggolaanaya inaad isla markiiba u qalanto, wadada, iyo shirarka iibinta buugaagta ee soo-galista ay u horseedayso xilliga ay u beddelaan boggaaga.
Sidee Chili Piper Ka Caawiyaa Kooxaha Iibka
Looma baahin doono waraaqo-qaybinta hoggaanka jahawareerka badan, emayllada dib-u-soo-noqoshada iyo fariimaha cod-bixinta oo keliya si loo ballansado kulan, iyo in aan fursado badan lumin sababtoo ah tartiib tartiib tartiib tartiib ah.
Qalabka Chili Piper Ku dar
Chili Piper waxay ku siisaa rajadaada waayo-aragnimo jadwal wanaagsan oo mid kasta oo u rogta hogaamin badan kulamada aqoonta leh.
Isla markaaba ku xir xirmooyinka soo galaya - Concierge waxay kuu ogolaaneysaa inaad rajadaada jadwal u sameyso kulamada ama aad bilowdo wicitaano toos ah isla marka aad dirto foomka shabakada. Macsalaameyn fursadaha iibka ee seegay. Laablaab xawaarahaaga si aad uhogaamiso adiga oo ku xiraya reps iibsadayaal aqoon leh daqiiqad ay ku dhuftaan soo gudbinta foomkaaga internetka.
Kulamada ballanso meel kasta oo aad ka shaqeyso - Instant Booker-ka, wakiiladaadu waxay ballansan karaan shirarka iyo wicitaannada gacanta wicitaanno ilbidhiqsiyo ah iyagoo aan u baahnayn inay shaashadaha beddelaan.
Hal-guji ballansasho ka badan emaylka - Yaree qasabadaha iyo jadwalka kulammada si dhakhso leh. Ku dheji helitaankaaga saxda ah emaylkaaga oo u oggolow rajooyinka inaad ku qorto hal guji.
Wicitaanada waqtiga-dhabta ah iyo sheekaysiga fiidiyowga - Ma jiro tilmaan kafiican hogaamin kulul oo kafiican qof hada diyaar u ah inuu hadlo. Sii fursadaha ikhtiyaarka ah inaad ku bilowdo taleefan toos ah ama wicitaanno fiidiyoow ah oo toos ah boggaaga.
U qaybi shirarka saxda ah waqtiga dhabta ah - Wadada caqliga leh, shirarka waxaa si otomaatig ah loogu qorsheeyaa xubinta saxda ah ee kooxdaada iibka, taas oo kuu ogolaanaysa inaad si cadaalad ah ugu qaybiso hogaamiyaasha isla markaana aad tirtirto waraaqaha.
Uqalm, marin, iyo buug guji hal guji - Habka hogaaminta otomaatiga ah wuxuu hubiyaa in rajooyinka uqalma loo qorsheeyay iyadoo sax ah waqtiga dhabta ah. U adeegso macluumaadka lagu soo ururiyey foomkaaga internetka si aad ugu qalanto tilmaamaha soo-galista ee waqtiga-dhabta ah isla markaana aad ugu mariso wakiilka saxda ah ee iibka.
Wareeg wareeg ah - Hubso in si cadaalad ah loo qaybiyo macdanta "lead" iyadoo si otomaatig ah loo wado baaskiil iyadoo la adeegsanayo koox ka mid ah kuwa wax iibinaya markasta oo kulan cusub la ballansado.
Duub isdhexgal kasta oo ku saabsan Salesforce - Chili Piper wuxuu si otomaatig ah ugu diiwaangeliyaa dhacdooyinka Salesforce. Dhammaan qoraallada, dib-u-dhigga, iyo faahfaahinta kulanka ayaa la shaabadeeyey oo la duubay si ay kaaga caawiyaan inaad si wanaagsan u maareeyso dhuumahaaga.
Cabir oo hagaaji heerka sicirka beddelka - Lasoco marxalad kasta oo nidaamka kulanka ah, oo ay kujiraan ballansasho, shirar laqabtay, wax showr ah, jadwallo kale, iyo baajinta. Ku dhis warbixinnada Salesforce si aad si fiican u fahamto uguna fiicnaato beddelaadda hogaankaaga soo galaya.
Maxjarka Piper wuxuu la midoobayaa suuqgeynta iyo iibinta softiweerka otomaatiga - oo ay ku jiraan Salesforce Pardot, Hubspot, Marketo, Salesforce, Eloqua, Twilio, Zapier, Intercom, GoToMeeting, iyo Zoom.
Saxiix Bilaash ah Chili Piper
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Maxjarka Piper.
Tags: basbaaskacodkarnimohubsashointercomsuuqokalandarka iibkaiibiyaha duubista taleefankaiibinta duubista wicitaankajadwalka kulanka iibkashirarka iibkaiibinta wadadaiibka chat videoiibincafiska iibkaTwiliozapierzoom
Sida loo Gudbo loona kaydiyo Aqoonsiga Xiriirka ee Salesforce oo leh Foomamka Cuf-isjiidadka iyo WordPress